बलात्कारपछि यसरी हत्या भएको थियो निर्मलाको, हत्याको स्वीकार गर्दै बिष्टले दिए यस्तो बयान ! - Internet Khabar
बलात्कारपछि यसरी हत्या भएको थियो निर्मलाको, हत्याको स्वीकार गर्दै बिष्टले दिए यस्तो बयान !
August 21, 2018 Internet Khabar
काठमाडौं, ५ भदौं । गत साउन ११ गते भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको २५ औं दिनपछि हत्यामा संलग्न एकजना पक्राउ परेका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र कञ्चनपुर प्रहरीको टोलीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार बिष्टले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनलाई जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा उपस्थित गराइएको छ । अनुसन्धानमा संग्लन एक अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेका विष्टले बयानमा क्रममा आफूले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
साउन १० गते बाटोमा हिँडिरहेको बेला निर्मलाको साइकलको चेन खराब भएको थियो । निर्मलाको साईकलको चेन खराब भएपछि बिष्टले मिलाइदिएको अनि कोही नभएको देखेपछि उखुबारीमा लगेर बलात्कार गरेंको प्रहरी श्रोतले जनाएको छ । बलात्कार गर्दा योनीबाट रगत बगेपछि पक्राउ पर्ने डरले मैले हत्या गरेको हुँ,’ अभियुक्तको बयान उद्धृत गर्दै ती प्रहरी अधिकृतले भने ।
विष्टलाई प्रहरीले आईतबार राति ८ बजे भीमदत्त नगरपालिका–१९ खन्ना चौराहा नजिकै नहरमा शंकास्पद लागेर पक्राउ गरेको भए पनि सार्वजनिक नगरी अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरी श्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट विष्टको संलग्नता पुष्टि भएको छ, बाँकी अनुसन्धान भईरहेको छ,’ । बिष्ट छ महिना अघि मात्र आफ्नै भिनाजुको हत्या अभियोगमा २०६५ मा जेल परेका थिए । १० वर्ष हत्या आरोपमा कारागार बिताएर आएका हुन ।
जेल सजाय काटेर निस्किएका विष्ट होटलमा भाँडा माझ्ने, मजदुरी गर्ने लगायत काम गर्दै आएको बुझिएको छ । साउन १० गते हराएकी पन्तको ११ गते शव भेटिएको थियो । पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उनको बलात्कारपछि नै हत्या भएको पुष्टि भइसकेको छ । गत साउन १० गते घरबाट साथीको घरमा विज्ञान विषयको उत्तरपुस्तिका लिन गएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त ११ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
शेयर बजार ओरालो लाग्यो, यस्तो छ बजार मूल्य ?
चितवनमा ट्रकको ठक्करबाट दुईको मृत्यु, त्रिशूली नदीमा अर्को ट्रक खस्यो
लालपुर्जा नभएर द्यौला बस्तीमा पुनःनिर्माण रोकियो
सुस्तावासीले क्षतिपूर्तिबापतको रकम पाउने
September 14, 2017 July 21, 2018
१ मिनेटमै दाँतको दुखाई निको पार्न अपनाउनुहोस् यी उपाय